आहा ! पाखामा स्वास्थ्य चौकि भवन, स्थानीयमा खुसीयाली | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
आहा ! पाखामा स्वास्थ्य चौकि भवन, स्थानीयमा खुसीयाली
अशोज ९ गते, २०७५ - १३:०१
सिन्धुपाल्चोक । बाह्रविसे नगरपालिका ४ अगेरी पाखामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको छ । स्वास्थ्य चौकीको भवन अमेरिकन संस्था भोलिन्टियर सि डि आर टी क्यालिफोर्नियाको आर्थिक सहयोग र सान्टा रोजा काष्ठमाण्डपको सहयोगमा निर्माण भएको हो ।
३० लाख लगतमा निर्माण गरिएको ४ कोठे भवनमा नेपाल सरकारले दिने एच ए सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्दश्यले निर्माण गरिएको सि डि आर टि ले जनाएको छ । ०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असर र स्थानीयको सेवालाइ बुझेर यस ठाउँमा भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएर काम थालेका थियौं सोचे अनुसार स्थानीयको राम्रो सहयोग पाएपछि काम गर्न सकिएको सि डि आर टि क्यालिफोर्निका अध्यक्ष kadyn garrett schuman michael ले बताए, । बाह्रविसे बजारबाट ९ किलोमिटर माथि रहेको सो अगेरी पाखामा स्वास्थ्य सेवा पाउने भएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ । स्थानीय गजेन्द्र राउतले भने ‘हामीलाइ सरकारले दिने सेवा भन्दा बढि पाइने भएको छ । यसमा हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ । सानो उपचारको लागि समेत बजार जान पर्ने झन्जट पुरा भएको छ । त्यति मात्रै होइन बर्थिङ सेन्टर समेत हुने भएपछि महिलाहरुलाइ समेत राम्रो भएको उनले सुनाए ।
अर्का स्थानीय दुर्गा देवी बस्नेत भन्छिन्, महिलाहरुलाइ समेत राम्रो उपचार सेवा दिने भएपछि गाउँघरका स्थानीय हर्सित भएका छन् । सानो तिनो उपचारको लागि एक विहान खर्चिनु पर्ने थियो तर अव त्यो समस्या रहेन उपचार निशुल्क पाउने व्यवस्था भएपछि झन आफ्हरुमा खुसी भएको उनले बताइन् । कार्यक्ममा आउने ७० भन्दा बढि स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा समेत लिएका थिए ।
४ कोठे प्रि फ्याल भवनमा सुविधा सम्पन्न शौचालयको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ । सरकारले लिने सुविधा सरह सिडिआर टिले एच ए र साहयकको लागि ५ वर्षको लागि तलब सुविधा दिने गरि अहिले नै सम्झौता गरिसकेको सिडि आर टिका नेपाल सयोंजक प्रकाश बस्नेतले बताए । अब महिला दिदिबहिनीहरुले सुत्केरी सेवा समेत लिन सक्नेछन् । यस संस्थाको लागि हामीले एम्बुलेन्स समेत राख्ने तयारीमा छौँ, जुन जटिल विरामी भएर अस्पताल लैजानको लागि लागि स्वास्थ संस्थाको भवन वरिपरि निकै रमाइलो वातावरण बनाइएको छ । तल फुटबल चौर निर्माण गरेसगैँ भवन नजिकै स्विमिङ पुल समेत बनाइएको छ ।
सोमबार Ruth weirich clinic नामाकरण गरिएको सो स्वास्थ्य चौकीको भवनको उदघाटन पुर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरेका हुन् । स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन पश्चात बोल्दै पुर्वमन्त्री बस्नेतले भौगोलिक रुपमा बजारबाट नजिक देखिएपनि सरकारको स्वास्थय सेवाको पहुँच नरहेकोले यस भेगका स्थानीयको सुविधालाइ मध्यनजर गर्दै उक्त सेवा ल्याउनको लागि पहल गरेको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो जीवनको महत्वपुर्ण मानिन्छ, विनाशकारी भुकम्पको समयमा उद्दार तथा राहात वितरण गर्न आएको यो संस्थाले सिन्धुपाल्चोकमा धेरै काम गरिसकेको उनले बताए ।
संस्थाले यस ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने इच्छा देखाएपछि अगेरी पाखामा सो कार्यालय निर्माण गरिएको प्रष्ट पारे । सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाइ निल्याल्दै उनले भने, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि संञ्चार क्षेत्रले निकै ठुलो भुमिका निर्वा गरेको थियो । तर आज लोकतन्त्रको लागि योग्दान पुर्याएको सञ्चारमाध्यमलाइ नै सरकारले अकुंस लगाउने काम गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाइ आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा हाँस्यकलाकार शिवहरी नेपाल, देविरामा पराजुली, रोहित कार्की, गायक नवराज घोरासैनी, मन्जु गौतमले कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तथा विदेशी पाहूनाहरुलाइ मनोरञ्जन दिलाएका थिए ।
अशोज ९ गते, २०७५ - १३:०१ मा प्रकाशित